GIDDUGALA AADAA OROMOO
Hundeeffama Giddugala Aadaa Oromoo
Yaadni Giddugala Aadaa Oromoo hundeessuu kan madde Ogeessota Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaatiin yeroo ta’u, innis hanqinoota gama qorannoofi qo’annoo gama guddina Aadaa Oromootiin jiru maqsuuf jedhamee kan yaadamedha. Sana booda yaadni kun Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif dhiyaatee, fudhatama erga argatee booda, baajatni ijaarsa giddugala kanaaf barbaachisu mootummaa naannichaatiin ramadamee, ijaarsi akka eegalamu taasifame. Ijaarsi isaas bara 2001 eegalee bara 2007 xumuramee hojii akka eegalu taasifameera. Giddugalli kun akka biiroo mootummaa tokkootti of danda’ee akka dhaabbatu, dambii Mootummaa Naannoo Oromiyaa lakk167/2006tiin akka dhaabbatu ta’eera.
Giddugalli Aadaa Oromoo gamoowwan garaa garaa 10 kan qabu yoo ta’u; kutaalee tajaajila garaa garaa kennan hedduu qaba.Isaanis: kutaa mana kitaabaa, kutaa qorannoofi qo’annoo Oromoo, kutaa godambaa Oromoo, kutaa leenjii muuziqaafi galma walga’ii ta’uun kan tajaajiludha.
Hojii Ijoo Giddugala Aadaa Oromoo
Aadaa, afaan, seenaafi artii Oromoo irratti qorannoofi qo’annoo gaggeessuu,
Godambaa gurmeessuun agarsiisa ummataaf oolchuu,
Wiirtuu Odeeffannoo Mana Kitaabaafi Haddaarsaa gurmeessuun tajaajila dubbisaa kennuu.
Artii Oromoo misoomsuun guddina hawaas-dinagdee keessatti gumaacha akka taasisu godhuudha.
Ummataafi Aadaa Oromoo
Oromoon ummata aadaa, duudhaa, seenaafi safuu ooltee bultee dhandhamamee hin dhumne qabudha. Keessumaa aadaafi falaasamni ummata kanaa gadi fageenyaan yoo ilaalame icciitii lakkaa’amee hin dhumne kanofkeessaa qabudha. Aadaan ammoo calaqqee jiruufi jireenya saba tokkooti. Sabni tokko saba biraa irraa wanti adda isa godhu yookaan ittiin beekamu aadaa isaatiini. Oromoon aadaa boonsaa jaarmiyaalee sirna Gaada qabu keessaa dhimmoota siyaasaafi hawaasummaa keessummeessuufi adeemsa ittiin waldhabinsa hiiku heedduu qaba. Fakkeenyaaf, guddifachaa, siinqee, moggaasa, gumaa, bokkuufi wkf fayyadamaa tureera; ammas itti fayyadamaa jira. Kanaaf, yeroo itti aanutti jaarmiyaalee kanneen maal akka fakkaataniifi akkaataa itti hojjetan ilaalla.
Giddugalli mana kitaabaa namoota dubbisaniifi qorannoo gaggeessaniif tajaajila kennuu eegaleera. Manni kitaabaa kun kutaa afur qaba.
Jaarmiyaalee Araaraa Gurguddoo
Siinqeen hiika hedduu qaba. Siinqeen ulee qal’oo dubartoonni qabatanidha. Ulee ulfinaati. Siinqeen kennaa haadharraa intalaaf guyyaa cidha ishee kennamuufidha. Siinqeen mallattoo ulfinaafi aangoo dubartummaati. Uleen kun immoo kan tolfamu muka waddeessaarraa yoo ta’u, dhadhaafi ibiddaan qaaqamee halluu magaalaan faayamee qophaa’a.
Damee Artii Oromoo
Artiin jiruufi jireenya hawaasaa ibsuun rakkoo hawaas dinagdee hiikuuf gumaacha guddaa kan qabudha.Artiin bashannansiisuu qofa osoo hin ta’iin sammuu namaa gabbisuufi cimsuun lammii ga’umsa qabu horachuuf gargaara. Kanumarraa ka’uun Giddugala Aadaa Oromoo keessatti dameen artii Oromoo hundaa’ee hojii kan eegale yoo ta’u tiyaatira, fiilmii, muuziqaa, fakkii irratti hojii isaanirraa barbachisu gumaachuun tajaajila kennaa jiru. Kana malees, galmi tiyaatiraa hojii kan eegale yoo ta’u, agarsiisa fiilmii, muuziqaafi tiyaatiraaf tajaajila kennaa jira. Dhaabbilee mootummaafi miti mootummaatiif, akkasumas dhaabbilee hawaasaa adda addaatiif bakka marii ta’uun tajaajila kennaa jira.
Godambaan GAO keessatti argamu giddugalli kun erga hunda’ee jalqabee tajaajila kennaa jira. Godambaan kun hambaalee ummataa kan ibsan godinaalee Oromiyaa hunda keessaa walitti qabuun
gurmeessuun daawwattoota biyya keessaafi alaaf banaa ta’uun daawwatamaa jira.
Damee Qorannoo Oromoo
IDameen qorannoo Oromoo pirojeektiiwwan Biiroon Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa calqabsiise akka itti fufu taasiseera. Haaluma kanaan kitaabonni hedduun akka qophaa’an taasifameera. Kitaabota maxxanfamanis ummata biraan gahee jira.
Kanaan nu qunnamaa